Lixesha lokuba uyijike inkampani yakho ijonge ezantsi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 3, 2009 NgoLwesibini, nge-31 kaDisemba ngo-2013 Douglas Karr
Xa iinkampani zichaza ulawulo lwazo, uhlala ufumana umzobo opholileyo ophakathi kwabasebenzi abanika ingxelo kubo. Ezinamandla kunye nembuyekezo zihlala zidwelisiwe ngaphezulu… ngokulandelelana kwe- ukubaluleka .
Ayothusi. Oku kubeka umthengi phantsi kolawulo. Abo basebenzi bajongana nethemba kunye nabathengi mihla le bahlawulwa kancinci, abanamava, basebenza kakhulu kwaye ayibalulekanga Abasebenzi kwinkampani. A Ukukhuthazwa ihambisa ummeli weenkonzo zabathengi kude ukusuka kumthengi nakwindima yolawulo apho kukho imicimbi yanda kumphathi. Oku kufuneka kwenzeke kuba abasebenzi abanathemba, igunya okanye amandla okwenza utshintsho oluyimfuneko ukuzalisekisa ukulindela kwabathengi.
Ngaba ukhe wayicinga le njenge umthengi? Ubaluleke kakhulu ubekwa kwinqanaba ngezantsi Owona mqeshwa uphantsi. Abasebenzi abanemivuzo ephantsi, owona msebenzi mncinci kunye namathuba amancinci okunyusa okanye ithuba. Intle. Akumangalisi ukuba kutheni abathengi bayavukela!
Umhlobo uKyle Lacy kutsha nje uphonononge incwadi kaJason Baer, ​​uKoyisa kunye nokuGuqula:
Ngamazwi kaJason, imidiya yoluntu ngoku iphambili kumava abathengi. Iingcinga kunye nemibono yeemveliso azisenziwa zenziwe kwigumbi lebhodi (apho abantu abaninzi bangathanda ukukholelwa kuzo) kodwa zenziwe kumagumbi okuhlala, iivenkile zokutyela, iindawo zokuhlanganisana kunye neebhodi yezitshixo.
Xa ufunda ngempumelelo yeZappos, UTony Hsieh uyaqhubeka nokwenza inkonzo yabathengi kunye nendlela abameli beenkonzo zakhe abanikwa ngayo amandla okunceda umthengi. Nangona baphantsi kwezikhundla zembuyekezo, Zappos ulibuyise ngokufanelekileyo igunya lolawulo.
Lixesha lokuba zonke iinkampani zilahle ingxelo ye-atypical kunye nolwakhiwo lwamandla kwaye zajika zangaphezulu. Abathengi kufuneka babekwe phezulu kulawulo lwakho, abasebenzi bakho abasebenza ngaphambili kufuneka baxhotyiswe kwaye bathembeke ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo kumthengi. Abaphathi bakho, abalawuli kunye neenkokheli kufuneka babe njalo phu laphule kubasebenzi abajongene nabathengi bakho kunye nokuphuhlisa izicwangciso zexesha elide ngokubhekisele kwigalelo labo.
Okukhona ndisebenza kwiinkampani, kokukhona ndiyaqonda ukuba ezona nkokeli zibalaseleyo zezona zisebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo, zisuse imiqobo yendlela, zixhobisa abasebenzi, kwaye bazimisele ngokwenene zonke umthengi. Lonke igumbi elinebhodi elitsalayo ndilityeleleyo ligcwele ngabaqhankqalazi abacinga ukuba bangoyena ndoqo kwimpumelelo yabo, ukuba bafanele ukuba lapho bakhoyo, kwaye bazi ngcono kunomthengi.
Enye imveliso emangalisayo yolu xinzelelo kukuba sibona aba bantu behla njengeempukane. Lujongwa njani uluhlu lwabathengi bakho kwishishini lakho? Ngaba ziphezulu okanye emazantsi ekhonkco lamandla? Ycinge.
tags: umthengiiqhutywa ngumthengiuxhaso lwabathengiubunkokheli
Jun 4, 2009 ngo-1:21 AM
Iposti entle Doug. Ukutya okucingayo kule mihla kunye neminyaka yee-CEO ezihlawulwa ngaphezulu zicinga ukuba inkampani yeyabo ukupakisha izipaji zabo. Umthengi ngukumkani - hayi ngenye indlela.
Jun 4, 2009 ngo-10:47 AM
Iposti enomdla kakhulu, nangona eneneni kunzima ukuyiphumeza.
Juni 4, 2009 ngo-1: 39 PM
Impumelelo, inkqubela kunye notshintsho luhlala lunzima ukwenza kunesimo se-quo kunye nokusilela. 🙂
Juni 4, 2009 ngo-2: 04 PM
Xa ndisebenzela omnye wabathwali abakhulu abangenazintambo, kwakuhlala kumangalisa ukuba bahlala njani besungula imigaqo-nkqubo enyanzelisa abantu abathengisa / benkonzo ukuba bakwazi ukwenza LESS kumthengi. Kwaye bayazibuza ukuba kutheni ukugcinwa kuphantsi kangaka. Amashishini, kungakhathaliseki ukuba "imveliso" yawo yendabuko, kufuneka aqonde ukuba onke akwishishini lenkonzo.
Jun 5, 2009 ngo-7:14 AM
Yehla ubume bamandla kwaye uyijike...
Isithuba esiqaqambileyo Doug kwaye ndiyabulela ngekhonkco.
Ibhlog kaJason Baer ixabisa ixesha lesibini lokufunda.